Ingcinezelo yocingo, ucingo lokuFudumeza, iNickel Wire - TANKII
Ingcingo ye-FeCrAl Resistance Wire
ICuNi Resistance Ucingo
I-Ceramic / umoya ovulekileyo wokufudumeza i-coil / elementing ...
Izinto zokuFudumeza iBayonet
Wire Pure nickel ukumelana
Ubhedu Nickel ingxubevange Wire
I-Iron Chrome Aluminium Resistance aluminium
INickel Chrome Resistance Alloys
ITANKII ALLOY (XUZHOU) CO., LTD. sele ingene nzulu kwicandelo lezinto ezibonakalayo amashumi eminyaka, kwaye iseke ubudlelwane bexesha elide kunye nolubanzi kubambiswano lwasekhaya nakwamanye amazwe. Iimveliso zayo zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla kwaye ziye zanconywa ngabathengi bamanye amazwe.
Tankii ingxubevange (Xuzhou) Co., Ltd.kuba mveliso yesibini imali Shanghai Tankii ingxubevange Materials Co., Ltd., iingcali kwimveliso eliphezulu-ukumelana zombane zokufudumeza ingxubevange iingcingo (nickel-chromium ucingo, Kama ucingo, intsimbi-chromium -aluminum wire) kunye nokuchaneka…
Itanki Apm Phuma
Kutshanje, iqela lethu liphuhlise ngempumelelo i-TANKII APM. It is a advanced powder metallurgical, ukusasazeka kwaqiniswa, ferrite FeCrAl ingxubevange esetyenziswa kwiqondo lobushushu ityhubhu ukuya ku-1250 ° C (2280 ° F).
Zingahlala njani iityhubhu ezikhazimlayo ixesha elide
Ngapha koko, imveliso nganye yokufudumeza umbane ...
Ngaba uyazi lonke olu lwazi malunga noku ...
Ngocingo lokumelana, amandla ethu ...
Inombolo 8, iLoohuren Industrial Park, iZowuni yoPhuhliso lwezoQoqo zeXuzhou, Jiangsu, 221011 China
Umnxeba weFektri:0086 516 8773 8786
Izicelo zeNzululwazi, I-Nichrome, UNickle Chrome ingxubevange yocingo, Ion Nitriding, Oomatshini boku-ayina, Iribhoni ingxubevange Bayonets,